नआत्तिनुस सफलता तपाईंकै हातमा हुन्छ - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
नआत्तिनुस सफलता तपाईंकै हातमा हुन्छ
प्रकाशित मिति: ९ कार्तिक २०७४, बिहीबार November 5, 2017
१)’रिस’को उल्टो ‘सरी’ पनि हुन्छ । कहिलेकाही उल्टो बोल्दा नि फाइदा हुन्छ
२)दुनियामा यौटा पनि समस्या नभएको मान्छे को होला ? -एक जना रैछ तर ऊ आर्यघाटमा जल्दै थियो ।
३)मेरो एउटा पनि सत्रु छैन, सत्रु देख्यो कि मैले सिध्याइहाल्छु.. … उसलाई साथी बनाएर ।
४)मानिसहरू तब मात्र तिम्रो हात समाउँछन जब उनीहरूलाई थाहा हुन्छकि तिमी एक्लैपनि अगाडि बढ्न सक्छौ ।
५)शहर र गाउँमा दुई फरक छन । (i). शहरमा घरहरू नजिक नजिक हुन्छन तर मनहरू टाढा टाढा हुन्छन, गाउँमा घरहरू टाढा टाढा हुन्छन तर मनहरू नजिक नजिक हुन्छन । (ii). शहरमा घरहरू पक्का हुन्छन तर सम्बन्ध कच्चा हुन्छन,गाउँमा घरहरू कच्चा हुन्छन तर सम्बन्धहरू पक्का हुन्छन ।
६)मानिस भएर कहिल्यै हिम्मत हार्नू हुँदैन किनकी पहाडबाट निस्केको नदिले कहिल्यै कसै संग सोधेको छैन समुन्द्र कहाँ पर्छ?
७)क्षमता छ भन्दैमा हुदैन, वर्षौदेखि सूर्यले जलाउन नसकेकोकागजलाई यौटा सानो हाते लेन्सले त्यो पनि दुई मिनेटमै त्यै सूर्यको प्रकाश लिएर जलाइदिन सक्छ । यदि हाम्रो दिमाग हजारतिर छरियो भने बर्षौ लगाए पनि यौटा काम राम्रो बन्दैन, यसर्थ आफ्नो लक्ष्यमा यसरी केन्द्रित हुनुस यसरी केन्द्रित हुनुस ताकि तपाइको दिमागबाट पनि आगो बर्षियोस ।
८)कुनै पनि मान्छे असाधारण हुँदैन, सबै मान्छे हामीजस्तै हो सामान्य, ….तर सहि समयमा सहि निर्णय लिँदा उनिहरु असाधारण बन्छन!_ _यो यौटा कला हो!!
९)यदि सपना पूरा भैरहेको छैन भने बाटो बदल्नु,सिद्धान्त होइन ,किनकी रुखले हमेशा पात बदल्ने गर्छ जरा होइन….
१०)नदीमा हामफाल्दैमा कसैको मृत्यु हुदैन।मृत्यु त तब हुन्छ जब पौडिन आउदैन ! परिस्थिति कहिल्यै समस्या बन्दैन,समस्या त तब बन्छ जब हामीलाई परिस्थितिसँग जुध्न आउदैन !
११)परिस्थिती आफ्नो अनुकुल भएन भनेर गुनासो गर्नुको सट्टा आफूलाई मजबूत बनाउन तिर लाग्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ,किनकी संसारको नियम नै यस्तो छ कि-“जब हावा चल्छ त्यस्ले बल्ल तल्ल बल्दै गरेको झुपडिको दियोलाई निभाइदिन्छ भने पहिल्यै सल्किसकेको जङ्गलको आगोलाई झनै दन्काइदिन्छ ।”
नेपालको संकट अझै ३ वर्षः ज्योतीष नरेन्द्र शास्त्री
असनेपालन्युज- ज्योतीष नरेन्द्र शास्त्री भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ र उहाँको यस भविष्यवाणीलार्इ सबैले विश्वास […]
डाइटिङमा हुनुहुन्छ ? होसियार, डाइटिङकै कारण २३ किलोकी भइन् यी महिला
एजेन्सी । सबै महिलालाई स्लीम फिगर बनाउने मन हुन्छ । आजभोलि मोटोपना घटाउनकै लागि बजारमा अनेक तरिका बताइएका […]
शरीरका यी अङ्ग बारम्बार छुँदा लाग्न सक्छन् रोग
असनेपाल न्युज । कहिलेकाही हाम्रै शरीरका अंगहरू रोगका संक्रमणको अाधार बन्न सक्छन् । हाम्रा शरीरका कतिपय भागमा […]
निर्वाचनमा आममतदाताले अब कार्यकर्ता नभई जनता भएर मनन गर्ने कि?
यतिबेला मुलुक निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भईरहंदा धमाधम रुपमा दलहरु उम्मेदवार खडा गर्न लागिपरेका छन्। […]